ဆီမီးဖိုင်နယ် တစ်နေရာကို မြန်မာအသင်း ရယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်
အုပ်စု(က)မှာ ဆီမီးဖိုင်နယ်(၂)နေရာကို ဘယ်အသင်း ရယူသွားမလဲ
23 Nov 2018 . 7:36 PM
၂၀၁၈ ဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဆင့်တွေကတော့ Tempo မြင့်တက်လာနေပါပြီ။ အုပ်စု(က)မှာ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ အုပ်စု(ခ)မှာ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူတို့ ဆီမီးဖိုင်နယ် အိပ်မက် မက်ခွင့်ရဖို့အတွက် အကြိတ်အနယ်ကစားရတော့မှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအသင်း ပါဝင်နေတဲ့ အုပ်စု(က)ရဲ့ အနေအထားကိုပဲ ဦးစားပေးပြောချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အုပ်စုတွင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါရစေ . .
၁ . အမှတ်အများဆုံး (၂)သင်း
၂ . ဂိုးကွာခြားချက်
တကယ်လို့ (၂)သင်း ဒါမှမဟုတ် (၃)သင်းဟာ ဒီစည်းမျဉ်း(၃)ခုနဲ့ တူညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် ဆုံးဖြတ်မယ့်စည်းမျဉ်းတွေက . .
၁ .သက်ဆိုင်ရာအသင်းတွေ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ရလဒ်
၂.ဒီအသင်းတွေရဲ့ ပယ်နယ်တီဧရိယာအတွင်း ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု
၃.Fair Play စည်းမျဉ်းမှာ အမှတ်အနည်းဆုံး
၄.ဆူဇူကီးပြိုင်ပွဲ တာဝန်ခံတွေရဲ့ မဲခွဲမှု တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စု(က)ရပ်တည်မှု ဇယားကို ကြည့်ရအောင် .
ဒီစာရင်းအရတော့ ဗီယက်နမ်အသင်းဟာ ဆီမီးဖိုင်နယ်ကို တက်ဖို့ ရာနှုန်းပြည့်သေချာနေပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ မလေးရှားနဲ့ မြန်မာ သရေကျခဲ့ရင် ဗီယက်နမ်အသင်းဟာ ကမ္ဘာဒီးယားကို အနည်းဆုံး(၅)ဂိုးပြတ် ရှုံးမှ အုပ်စုက ထွက်ရမယ့်အနေအထားပါပဲ။ မလေးရှားနဲ့ မြန်မာတို့ဟာ ဆီမီးဖိုင်နယ်တစ်နေရာကို အသည်းအသန်လုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားအသင်းက အနိုင်ရမှတက်မယ်ဆိုပေမယ့် မြန်မာအသင်းကတော့ သရေတစ်မှတ်ဆိုရင် အခြေအနေကောင်းသွားပါပြီ။ အားရစရာတစ်ခုက မြန်မာအသင်းဟာ မလေးရှားနဲ့ စီနီယာအဆင့် နောက်ဆုံး(၄)ပွဲဆက် တွေ့ဆုံမှုမှာ တစ်ပွဲမှ မရှုံးခဲ့ဘဲ (၂)ပွဲနိုင်၊ (၂)ပွဲသရေကျခဲ့တယ်။ ကဲ .. ပရိသတ်ကြီးရေ ..မလေးရှားနဲ့ မြန်မာတွေ့ဆုံမှုမှာ ဘယ်သူနိုင်မလဲ၊ ဆီမီးဖိုင်နယ်တစ်နေရာကို ဘယ်အသင်း ရယူသွားမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . .
Photo:The Myanmar Times,FOX Sports Asia,Goal
အုပျစု(က)မှာ ဆီမီးဖိုငျနယျ(၂)နရောကို ဘယျအသငျး ရယူသှားမလဲ
၂၀၁၈ ဆူဇူကီးဖလားပွိုငျပှဲ အုပျစုအဆငျ့တှကေတော့ Tempo မွငျ့တကျလာနပေါပွီ။ အုပျစု(က)မှာ မွနျမာ၊ ဗီယကျနမျ၊ မလေးရှား၊ အုပျစု(ခ)မှာ ထိုငျး၊ ဖိလဈပိုငျ၊ စငျကာပူတို့ ဆီမီးဖိုငျနယျ အိပျမကျ မကျခှငျ့ရဖို့အတှကျ အကွိတျအနယျကစားရတော့မှာပါ။ ဒီနရောမှာ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာအသငျး ပါဝငျနတေဲ့ အုပျစု(က)ရဲ့ အနအေထားကိုပဲ ဦးစားပေးပွောခငျြပါတယျ။ ပထမဆုံးအနနေဲ့ အုပျစုတှငျး သတျမှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို ဖျောပွလိုကျပါရစေ . .
၁ . အမှတျအမြားဆုံး (၂)သငျး
၂ . ဂိုးကှာခွားခကျြ
တကယျလို့ (၂)သငျး ဒါမှမဟုတျ (၃)သငျးဟာ ဒီစညျးမဉျြး(၃)ခုနဲ့ တူညီနတေယျဆိုရငျတော့ နောကျထပျ ဆုံးဖွတျမယျ့စညျးမဉျြးတှကေ . .
၁ .သကျဆိုငျရာအသငျးတှေ တှဆေုံ့ခဲ့တဲ့ ရလဒျ
၂.ဒီအသငျးတှရေဲ့ ပယျနယျတီဧရိယာအတှငျး ဂိုးပေါကျကနျသှငျးမှု
၃.Fair Play စညျးမဉျြးမှာ အမှတျအနညျးဆုံး
၄.ဆူဇူကီးပွိုငျပှဲ တာဝနျခံတှရေဲ့ မဲခှဲမှု တှပေဲဖွဈပါတယျ။ အုပျစု(က)ရပျတညျမှု ဇယားကို ကွညျ့ရအောငျ .
ဒီစာရငျးအရတော့ ဗီယကျနမျအသငျးဟာ ဆီမီးဖိုငျနယျကို တကျဖို့ ရာနှုနျးပွညျ့သခြောနပွေီလို့ ဆိုရမှာပါ။ မလေးရှားနဲ့ မွနျမာ သရကေခြဲ့ရငျ ဗီယကျနမျအသငျးဟာ ကမ်ဘာဒီးယားကို အနညျးဆုံး(၅)ဂိုးပွတျ ရှုံးမှ အုပျစုက ထှကျရမယျ့အနအေထားပါပဲ။ မလေးရှားနဲ့ မွနျမာတို့ဟာ ဆီမီးဖိုငျနယျတဈနရောကို အသညျးအသနျလုရမှာဖွဈပါတယျ။ မလေးရှားအသငျးက အနိုငျရမှတကျမယျဆိုပမေယျ့ မွနျမာအသငျးကတော့ သရတေဈမှတျဆိုရငျ အခွအေနကေောငျးသှားပါပွီ။ အားရစရာတဈခုက မွနျမာအသငျးဟာ မလေးရှားနဲ့ စီနီယာအဆငျ့ နောကျဆုံး(၄)ပှဲဆကျ တှဆေုံ့မှုမှာ တဈပှဲမှ မရှုံးခဲ့ဘဲ (၂)ပှဲနိုငျ၊ (၂)ပှဲသရကေခြဲ့တယျ။ ကဲ .. ပရိသတျကွီးရေ ..မလေးရှားနဲ့ မွနျမာတှဆေုံ့မှုမှာ ဘယျသူနိုငျမလဲ၊ ဆီမီးဖိုငျနယျတဈနရောကို ဘယျအသငျး ရယူသှားမလဲဆိုတာ ရငျခုနျစှာနဲ့ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . .